Taariikhda My Butros » 6 Sababaha Si saar Down aad telefoonka gacanta
Last updated: Nov. 18 2020 | 2 min akhri
Waad guud ahaan fadhiya inanta ama nin aad u dhabaynaya riyadaada xili uu qado u shumaca meesha hippest cusub ee magaalada. Wax kasta waa la diidanaa in ay la socdaan in hab royally taataabtay ilaa aad telefoon bilaabo qarxinta qoraalka ka saaxiibadaa, walaashay iyo hooyaday xitaa - dhan weydiinaya sida ay u socdaan ama haddii ay tani waa "mid." Waxaad lahaanaysaa labo doorasho: Aamuska Catalonia ee, telefoonka iska fogeeya oo iska dhaafin ilaa aad ka weyn tahay ama aad ka jawaabi kartaa fariin kasta oo kasta oo ka imanaya. Haddii aad doorato dambe aad ordaya khatarta ah ma aha oo kaliya ku qariyaan taariikhda, laakiin sidoo kale ka iman kara ee suurtogalka ah ee filimada hindiga mustaqbalka qofkan hadda-xanaaqin.
Waa maxay sababta aad hoos u dhigay telefoonka gacanta lagu jiro taariikhda a, iyo sida isagoo sidaas samaynaya kartaa ilaa fursadaha aad ku guulaysanayso mustaqbalka? Eeg lix sababaha shukaansi caataysnaa waa AMAANAHA xiriir iyo waxa aad sameyn kartaa in aad soo jiidin nolosha jacaylka casriga ah ka buuxo.
Waad samaynta isaga dareento sida uu gebi ahaan aan muhiim ahayn. Haddii aan jirto xaalad degdeg ah oo ba'an sida xubin ka mid ah qoyska dhow ka loo qaaday isbitaalka ama aad Tababaraha ku hanjabaysa in ay ku eryaan haddii aadan soo celin emails iyada, waxaa jira sabab yar looga danlahaa in aad fiiro ka taariikhda si aad telefoon. Halkii taag shaashada halkii aad taariikhda wejigiisa u fiidkii oo dhan, aad telefoon iska fogeeya oo isaga siin Dareenkaaga oo dhan.
Waxay u malayn karaan in aad tahay oo kaliya uma soo gelin iyada. Ka soo qaad in aad tahay taariikhda la wadaago qof aad runtii lahaa halkii mar dambe la hadal. Maxaad samayn lahayd? Haddii jawaabtaadu dhacaa meel u dhow "iyada bixin dareenka" category - Taasi waa waxa aad samaynaysid marka aad taariikh caataysnaa. Inkasta oo aad si dhab ah qorid iyo gabal ugu fiican in aad taariikhda waa uber-yaab leh, ayay qaadan kartaa tallaabooyinka aad sida calaamad u tahay in aad leedahay eber xiisaha iyada.
Waxaad ka eegi xun. Maxaa hooyadaa dhihi lahaa ee asluubta xun? Laasgeel aad tahay at casho qoys, oo ka feker dhaqanka-habboon miiska. Xitaa haddii aad tahay qof aan si sax ah tukan Miss 100 boqolkiiba waqtiga, tani waa mid ka mid to-yeela waa in aad raacdo.
Wadahadalka waa dariiqa laba haad ah. Taariikhaha ugu horeeya siiyaan waqti ay aad adiga iyo lammaanahaaga cusub imaan kara ay yihiin uun helitaanka fursad ay isku bartaan. Joogto milicsaday at qolkaaga, ka jawaabidda emails ama qorid saaxiibo ilaa dhigeysa jidgooyo weyn marka ay timaaddo wadahadalka nool, taas oo lagu dhacaya xaq hortaada. Is weydii haddii aad sheegaya BFF in taariikhda yahay "sidaas cute" sababtoo ah waxa uu ka daaweysa uu beagle sida waa uu ilmahaagu waa ka fiican yahay dhab hadalka isaga ku saabsan jaceylka uu u qabo inuu xayawaanka.
Waad samaynta aragti ah ma-si-fiican ugu horeeyay. Pool shukaansi ayaa gaadho fog oo ballaaran, oo waxaa had iyo jeer la kalluunka kale in aad meel qaado. Samaynta aragti sabool ah maalinta ugu horeysa ee ay u badan tahay in midabka afkaar lamaanahaaga iman kara ee qofka aad tahay iyo haddii ay mar kale kuu raaci doonaa baxay. Miyaa oranayso "haa" taariikhda labaad ka dib markii daawashada, waxaad ku Bixisaan 30 out of aad 45 texting casho daqiiqo? Waxay u badan tahay ma.
Connections waxaa lagu sameeyaa dadka, oo aan technology. Inta aad laga yaabaa in la kulmay online iyo horeysay "la hadlay" via text, si loo sameeyo xiriir ka run jacaylka aad u baahan tahay dhabta ah aadanaha-to-insaanka dhexgalka. Qaadidda aad telefoon sidoo kale siinayaa taariikhda lacag la'aan ah inay sidaas oo kale sameeyaan boqornimadii. La hadalka dadka kale inta aad taariikhda aad jeedineysaa samaynta xidhiidh aad la midba midka kale.